होटलमा मन्त्रीको क्वार्टर - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
होटलमा मन्त्रीको क्वार्टर
काठमाडौं । स्वयम्भूको भगवान्पाउमा रहेको ‘स्वयम्भू पिस होटेल’मा बिहानबेलुका सुरक्षाकर्मीको आवतजावत बाक्लिएको छ । वरपरका स्थानीयवासी अचम्ममा थिए, होटलभित्र के भएको छ ? किन सुरक्षाकर्मीको दौडधुप छ ? गत शुक्रबार बिहान करिब ७ बजे ‘स्वयम्भू पिस होटेल’ पुग्दा गेटमै सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । केही मिनेटमा एउटा सरकारी गाडी गेटबाट भित्र प्रवेश ग¥यो । गाडी नम्बर थियो, बा१झ १००९ ।
उक्त गाडी थियो गृह राज्यमन्त्री श्याकुमार श्रेष्ठको । उनी अहिले झन्डावाल गाडीसहित होटलम बस्छन् । श्रेष्ठ यसअघि नयाँबजारमा कोठा लिएर बस्दै आएका थिए । सुरुमा त उनले आफू होटलमा बसेको कुरा अस्वीकार गरे, ‘होइन, होइन ।’ होटेलको नाम नै लिएपछि उनले अस्वीकार गर्न सकेनन् । भने, ‘नियमित बस्दै आएको ठाउँ साँघुरो भयो । मन्त्री भएपछि आउनेजाने मान्छे बढी भएकाले गाउँकै दाइको होटेलमा बस्दै आएको हुँ ।’
सरकारले पटकपटक थप गरेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या ५० पु¥याएको छ । यसमा राज्यमन्त्रीको संख्या नै २३ जना रहेको छ । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेपछि अहिले राज्यमन्त्रीलाई कार्यकक्ष कहाँ दिने भन्ने समस्या पर्न थालेको छ । मन्त्रीहरूका लागि पुल्चोकमा मन्त्री क्वार्टर भए पनि त्यहाँ सीमित ठाउँ मात्र छ । २३ जना मन्त्री र तीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाले भएकै मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ ठाउँ पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा जुनियर राज्यमन्त्रीहरूले ठाउँ पाउन सक्ने कुरै भएन । पर्याप्त ठाउँ नभएपछि उनी होटलमै कोठा लिएर बस्न थालेका हुन् ।